रवि लामिछाने ससुराको अस्पतालले महिनैपिच्छे मान्छे मार्दा किन मौन ? | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
रवि लामिछाने ससुराको अस्पतालले महिनैपिच्छे मान्छे मार्दा किन मौन ?
०७ असोज २०७६, काठमाडौं
उपचारका नाममा पटकपटक मान्छे मार्ने चावहिलको ओम अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सर्वसाधारण जनतालाई अत्यन्तै महंगो शुल्क लिएर उपचार गराउने ओम अस्पतालले महिनामा एकजना मानिसलाई यसरी नै अकालमा मारिरहेको छ । हालैमात्र धादिङकी एक २९ बर्षे महिलाको पत्थरी उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ ।
उपचारमा हेलचेक्रयाँई गरेर निधन भएपछि पीडितलाई ठूलो रकम दिएर मिलाउने प्रचलन छ । अस्पतालले मानिसको जिवनलाई पैसासँग साटेको छ । यो अस्पतालमा महंगो शुल्कसमेत तिर्नुपरेको छ । सरकारी निकायले यसबारे चासो देखाएको छैन । मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय पनि सेटिङमा चल्ने गरेका छन ।
लापरवाही गर्ने अस्पताललाई कुनै कारवाही नगरेका कारण अस्पतालले दैनिकजसो मानिसको जिवनमा खेलवाड गर्दै आएका छन् । यो अस्पतामा रवी लामिछानेका ससुरा उद्धब पौडेल सहित अरु धेरैको लगानी रहेको छ । अरुले सानो गल्ती गरेपनी खेदो खन्ने लामिछाने आफ्नो ससुराको अस्पतालले महिनैपिच्छे मान्छे मार्दा पनि चूँ समेत बोलेका छैनन ।
२५० वर्षपछि जंगी अड्डामा सेनाका संस्थापक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणको सालिक स्थापना